Suuq Istiraatiijiyadeed oo Muddo-dheer qaatay Geesinimo | Martech Zone
Suuq Istiraatiijiyadeed oo Muddo-dheer qaadanaya Geesinimo
Talaado, July 7, 2009 Isniin, February 8, 2016 Douglas Karr
Markii aan la shaqeynayay macaamiisha waagii hore ololayaasha tooska ah ee boostada, furaha guusha wuxuu ahaa fariimo badan oo khuseeya oo la soo bandhigay marar badan. Waxaan uga digayaa xayeysiiyeyaasha inay diraan hal mar boostada oo ay filayaan natiijooyin wanaagsan. In ka badan iyo in ka badanba waxaan siinay macaamiisheenna caddeyn ah in soo noqnoqoshada iyo ku-habboonaanta ay fure u ahaayeen guusha.
Iyadoo aan loo eegin sida ugu wanaagsan ee aad ugu qalanto dhagaystayaashaada, runtu waxay tahay in farriinta kaliya ay u egtahay sida inaad farriin dhalo ku dhex dhigtid oo aad jawaab ka sugto. Taasi maaha in la yiraahdo ololahani wax saameyn ah kuma lahan ama ku soo laaban maalgashi… badanaa way sameeyaan. [Sawir qurux badan ayaa laga helay Blog abeeso]
Olole suuq-geyn istiraatiiji ah oo muddo dheer soconaya wuxuu u shaqeeyaa waxyaabo badan sida xiisaha isku darka, in kastoo. Gudaha ku celcelinta fariinta, ma tihid turunturoon… waxaad siineysaa fursado dheeri ah oo aad farriinta ku qaban karto. Waxaa laga yaabaa in markii ugu horeysay, booqdaha uusan helin waqti uu ku sii baaro further ama waxaa laga yaabaa in akhristaha uusan fursad u helin inuu iibsado ama ku lug yeesho waqtigaas.
Suuq geynta istiraatiijiga ah iyo xirfadlayaasha suuqgeynta suuqyadu waxay jecel yihiin ololeyaasha suuqgeynta muddada-dheer maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa iyaga waqti dheeraad ah faleebo or khiyaano macluumaad dheeri ah oo macluumaad ah ololaha oo dhan. Halkii aad si adag loogu riixi lahaa muddo-gaaban, weerar cadaadis-sarreeya, suuq-geynta istiraatiijiga ah wuxuu sugayaa macaamilka inuu u yimaado iyaga. Macaamilku wuxuu rabaa inuu u yimaado iyaga ka dib markuu wax bartay, dhismo xiriir, iyo inuu si buuxda u aqoonsado fursadda.
Maanta, waxaan ku faraxsanahay inaan la hadlo Jascha Kaykas-Wolff, Suuqgeynta VP ee Webtrends waxaana ka wada hadalnay sida loogu raaxeysto xeeladahaas muddada-dheer. Cudurdaar kale iskuna ekaysi kaluumeysi kale, laakiin waxaan u ekeyn lahaa tuubista biyaha dhexdeeda ama ruugista biyaha iyo qulqulka. Waad qabsan kartaa kalluun markasta oo aad qadka ku tuurtid, laakiin waxaad u horseedi doontaa kalluun aad u tiro badan bigger iyo kalluun ka waaweyn… markaad xaaqdid oo aad biyaha isku dhufato.
Webtrends ayaa ka shaqeyneysa istiraatiijiyad suuq geyn aad u gaar ah haatan… waana sameynta news. Waxaan rajeynayaa inaan daawado istiraatiijiyadda oo ciyaareysa waqti ka dib iyo inaan arko falcelinta warshadaha. Xaqiiqda ah inay durbaba heshay sumcad (xitaa qaar xun) ayaa xiiso leh.
Istaraatijiyadaha muddada-gaaban sida caadiga ah waxay leeyihiin khatar ka yar laakiin waxay keenaan natiijooyin dhakhso iyo ka yar. Istaraatijiyadaha muddada-dheer mararka qaarkood waxay leeyihiin khatar weyn laakiin dhalidda ayaa caadi ahaan aad u weyn markay shaqeyso. Geesinimada suuqgeynta waa la abaalmariyaa, in kastoo. Waxaan ku ixtiraamayaa shirkadaha leh istiraatiijiyad waqti-dheer oo aad u badan. Waa sababta aan ugu horreyn uga shaqeeyo raadinta dabiiciga iyo warshadaha warbaahinta bulshada… Waxaan aaminsanahay inay yihiin halyeeyada istiraatiijiyadda muddada-dheer. Istaraatijiyadaha muddada-dheer waxay dejiyeen rajooyin waaweyn iyo; natiijada, macaamiisha faraxsan.
Tags: Jascha Kaykas-Wolffsuuq geynta istiraatiijiyadeedistaraatijiyadwebtrends
Suuqgeynta Real Estate Online way Dhacday
Jul 8, 2009 markay ahayd 5:50 AM
Doug, tani waa sida saxda ah ee aan si dabiici ah ugu qabanayo mid ka mid ah mashaariicdayda. Aragtida muddada fog, iibinta jilicsan ama iibin la'aan, diiradda saar dhismaha bulshada marka hore. Aniga ahaan, xeeladaha cadaadiska sare ee muddada-gaaban waxay umuuqdaan kuwo khatar badan!